Huawei Watch GT 2: Falanqaynta Huawei smartwatch cusub | War gadget
Falanqaynta Huawei Watch GT 2: Smartwatch-ka oo leh madax-bannaani dheeraad ah
Dhowr usbuuc ka hor ayaa Huawei Mate 30 si rasmi ah. Dhacdadan soo bandhigidda, sumadda Shiinaha ayaa nooga tagtay waxyaabo cusub, sida soo bandhigidda smartwatch-kaaga cusub. Waxay ku saabsan tahay Huawei Watch GT 2, oo la bilaabay ka dib guushii jiilkii ugu horreeyay, oo iibkoodu horey u dhaafay 10 milyan oo unug adduunka.
Waxaan mar hore awoodnay inaan ka tijaabinno saacaddan cusub astaanta Shiinaha, maalmahan oo dhan. Waxaan awoodnay inaan tijaabinno oo aan falanqeyno. Markii la soo bandhigayay, Huawei Watch GT 2 waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay saacad badan, oo leh ismaamul aad u weyn iyo inaan awoodno inaan u adeegsanno marka aan sameyneyno isboortiga iyo maalinteenna maanta iyo sidoo kale.
1 Caddaymaha Huawei Watch GT 2
2 Naqshadeynta iyo qalabka
3 Raaxo iyo iftiin
4 Isku waafajinta Huawei Watch GT 2 taleefanka
5 Display iyo interface
7 Hurdo iyo kadeed
8 Wicitaanada iyo fariimaha
10 Madax-bannaanida: shaqada muhiimka ah ee Huawei Watch GT 2
11 LOOGU TALAGALAY
Caddaymaha Huawei Watch GT 2
Marka hore waxaan kuu dhaafayaa adiga waxyaabaha muhiimka ah ee saacaddan ee sumadda Shiinaha. Si aad haddaba fikrad cad uga haysato waxa uu Huawei Watch GT 2 nooga tagayo heer farsamo. Saacad ilaalineysa naqshad la mid ah tii hore, in kasta oo ay ku imaaneyso waqti isku mid ah horumar.
Qiyaasta 1,39-inch shaashadda AMOLED (454 x 454 dhibco)
42 ama 46 mm kiis
Nidaamka hawlgalka ee LiteOS
Kirin A1 oo ah processor
Kaydinta ilaa 500 heesood
Ilaa laba toddobaad oo ismaamul ah
Dareemayaasha: Gyroscope, Magnetometer, Barometer, Ambient Light, Accelerometer, Heerka Wadnaha
Cabirka: 45.9 x 45.9 x 10.7 mm
La jaan qaada Android 4.4 ama ka dib iyo iOS 9.0 ama ka dib
Qaabka aan ku falanqeyneyno kiiskan ayaa ah midka ugu weyn, midka leh dhexroor 46 mm.
Huawei Watch GT 2 waxaa loo soo bandhigay sidii daawasho isu dheelitiran. Tani waa wax ku cad naqshaddiisa, oo leh laba taaj, oo ka dhigaysa mid aad ugu eg naqshadda saacad caadi ah, oo u oggolaanaysa isticmaalkeeda aad ugu habboon, labadaba marka la ciyaarayo isboortiga iyo in la xidho labadaba. . Intaas waxaa sii dheer, saacaddu waxay noo oggolaaneysaa inaan adeegsanno xargaha la is-weydaarsado, taas oo ka dhigaysa xitaa wax badan. Habka loo beddelo suumanka waa mid fudud, maadaama dhammaantood aan ka helno farsamo, taas oo noo oggolaanaysa inaan soo saarno oo aan kuwa cusub dhigno. Waa farsamooyin isku mid ah oo aan ku aragno smartwatches kale, marka lagu daro noocyada saacadaha caadiga ah.
Moodelkan noociisa caadiga ah, oo ah midka aan tijaabinay, wuxuu ku yimaadaa suun maqaar bunni ah (Pebble Brown) iyo kabo isboorti oo caag ah oo madow ah. Jijimis bunni ah waa mid aad u qurux badan, mid caadi ah oo waliba aad u deggan. Taas ayaa farxad ka dhigeysa in lagu xiro Huawei Watch GT 2 jijimadan marwalba.
Suunka caagga ah ayaa loogu talagalay la istcimaalo marka isboortiga la sameynayo. Waa qaab isboorti oo dheeri ah, marka lagu daro inay tahay walax adkaysi badan. Sidaa darteed, gaar ahaan haddii loo isticmaalo marka la dabaalanayo (saacaddu waxay u oggolaanaysaa doorashadan), way ku habboon tahay in la isticmaalo suunka caagga ah, oo si fiican ugu adkaysata xaaladaha noocan ah. Sidoo kale way ka raaxo badan tahay haddii dhidid la sameeyo ama haddii roob da’o oo qoyan, taas oo u oggolaan doonta adeegsi aad u raaxo badan ee saacaddan markasta.
Haysashada dhowr xargo ayaa sameeya waxaan u isticmaali karnaa Huawei Watch GT 2 nooc kasta oo xaalad ah. Marka sifiican ayey uqabataa marka loo eego kala duwanaanshaha. Intaa waxaa dheer, tayada qalabka loo isticmaalo saacadda lafteeda iyo suumanka ayaa ka sii cad, sidaa darteed shaqo wanaagsan ayaa laga qabtay goobtan soo saaraha Shiinaha.
Raaxo iyo iftiin
Mid ka mid ah dhinacyada sida aadka iiga yaabiyey, ee sida ugu fiican, ku jira smartwatch-kan waa wax aad u fudud. Suunka wuxuu culeyskiisu yahay 60 ama 70 garaam, iyadoo kuxiran suunka. Sidaa darteed, waa wax aad u fudud in la isticmaalo, waxaa jira waqtiyo aad xitaa iloobeyso inaad xiraneyso saacadaada, taas oo muhiim u ah kiiskan, maadaama ay ka dhigan tahay inaad xorriyad muuqata oo dhaqdhaqaaq leh ku leedahay arrintan. Sidaas darteed waxaad ugu isticmaali kartaa si raaxo leh isboorti ama maalinba maalinta ka dambeysa.
Xitaa waqtiga jiifka waxaan isticmaali karnaa saacadda iyada oo aan lagu raaxaysan. In kasta oo ay kuxirantahay midkastaba dookhyadiisa, aniga shaqsiyan waxaa loo bartay inaan seexdo saacad la’aan, marka marka hore waxay ila noqotay wax layaableh inaad seexatid Huawei Watch GT 2 oo aad seexato, laakiin haddii aad heysato saacadda markaad seexanayso, adigu ma aha inuu dhibaato badan ku haysto arrintan. Intaas waxaa sii dheer, waxba kuguma dhici doonaan intaad seexanaysid, marka laga hadlayo kuuskuus ama xoqitaan, marka tani waxay kuu sahlaysaa inaad saacadda isticmaasho waqtiga jiifka.
Xarkaha waa la isku hagaajiyaa waqti kasta cabbirka curcurkaaga, waan hagaajin karnaa, si aan saacadda ugu raaxeysano. Dareenkan, waxa muhiimka ahi waa in la doorto cabbirka garaaca saxda ah. Waxaan haystaa curcurka xoogaa khafiif ah, sidaa darteed qaabka 46 mm waa xoogaa weyn yahay kiiskan, in kasta oo aanan wax dhibaato ah kala kulmin isticmaalka, laakiin way fiicantahay in la hubiyo inta ay le'eg tahay labadan qalab ee uu Huawei Watch GT 2 ku habboon yahay adiga curcurka In kasta oo garaacid xoogaa weyn ka dhigeysa isticmaalka saacaddu mid aad u deggan, gaar ahaan marka ay tahay inaad isticmaasho shaashadda taabashada dusheeda.
Samsung Galaxy Watch Firfircoon, waxaan falanqeyneynaa Samsung's smartwatch raqiis ah
Isku waafajinta Huawei Watch GT 2 taleefanka
Si saacadda loola jaanqaado taleefankeena casriga ah, waa inaan ku isticmaalnaa labada aaladood Bluetooth, taas oo u oggolaan doonta iyaga inay marka hore isku xirmaan, halka sidoo kalena aan ku soo dejisanno codsi taleefanka ah, waa maxay barnaamijka caafimaadka ee Huawei. Barnaamijkan waxaan ka heli doonnaa howlo iyo xog fara badan oo laga soo aruuriyay saacadda, sida masaafooyinka, dariiqyada ama xogta hurdada iyo diiqada.
Sidaa darteed, marka xiriir lala sameeyo Bluetooth la sameeyo oo aan ku dhejino codsigan taleefanka, waxaan horeyba uheli karnaa labada qalab oo iswaafajinaya leh wadar caadi ah. Haddii aad rabto inaad soo dejiso barnaamijka Caafimaadka ee Huawei (Huawei Health), waxaad ku sameyn kartaa xiriirkan:
Developer: Adeegga Internetka ee Huawei
Display iyo interface
Bandhigga saacaddu waa mid ka mid ah xooggiisa. Markan sumadda Shiinaha waxay isticmaashaa shaashad taabasho AMOLED 1,39-inch ah. Waa shaashad tayo leh, oo waliba na siisa farqi ka sarreeya iyo midabbo ka wanaagsan kuwii jiilkii ugu horreeyay ee saacaddan ka sameeyay astaanta Shiinaha. Waa shaashad aan awoodi doonno si fiican u akhri xitaa marka qorraxdu dhacdo ayaa si toos ah kuu siinaya, taas oo muhiim ah, marka lagu daro inaad raaxo leedahay. Sidaa darteed ku habboon in lagu isticmaalo dibedda iyo gudaha.
Ku saabsan interface, Huawei Watch GT 2 wuxuu nooga tagayaa mid aad u fudud in la isticmaalo isdhexgalka. Guud ahaan waxaa jira 13 qaybood oo kaladuwan oo aan ku isticmaali karno dhexdeeda, oo noocyo badan oo kala duwan ku jira dareenkan, adeegsi shaqsi ahaaneed oo saacad walba ah. Haddii aad rabto inaad beddesho wareegga, kaliya waa inaad ku riixdaa shaashadda dhowr ilbiriqsi oo liistada oo dhameystiran ay soo muuqan doonto Kaliya waa inaan midba midka kale uga gudubnaa ilaa aan ka helno midka aan dooneyno inaan saacadda ku isticmaalno. Ka dib waan gujinaynaa oo waxaan dhahnaa dial saacadda ayaa laga arki doonaa.
Sida isticmaalka saacadda, waa mid aad u deggan. Waxaan ka heli karnaa shaqooyin kala duwan Huawei Watch GT 2 adoo u maraya dhinacyada, markaa tan lafteeda way fududahay in la isticmaalo. Inta aan geli karno liiska buuxa adigoo gujinaya badhanka kore. Halkaas ayaan ka helnaa dhammaan xulashooyinka ay saacaddu na siiso, si aan u raadin karno qaybta aan dooneyno oo aan u geli karno. Waa dheecaan aad u badan in la kala guuri karo menusyada kala duwan iyo shaqooyinka gaadhka. Ikhtiyaarrada aan ka helno menu-ka ugu weyn ee saacadda ayaa ah qaar sida Jimicsi, garaaca wadnaha, Diiwaanada Waxqabadka, Hurdada, Cadaadiska, Xiriirada, Diiwaanka Wicitaanka, Muusikada, Farriimaha ama Qaylo-dhaanta, iyo kuwo kale Marka waxaan leenahay hawlo badan, oo aan u isticmaali karno waqti kasta.
Haddii aan hoos u dhigno shaashadda, sida marka aan ku sameyno tilmaantan taleefanka, waxaan marin u leenahay deg deg deg ah. Halkan waxaan ka helnaa dhowr ikhtiyaar, sida shaqada marwalba shaashadda, ha dhibin qaabka, dejinta, digniinta ama raadinta taleefankayga. Hawlaha sida joogtada ah loo isticmaalo ee sida ugu dhakhsaha badan loo heli karo xaaladdan oo ah tilmaam fudud.
Huawei Watch GT 2 waxaa loo sameeyay si aan ugu ciyaarno isboortiga. Sidaa darteed, wuxuu awood u leeyahay inuu duubo ilaa iyo 15 waxqabad kala duwan, sidaa darteed jimicsigayaga ayaa lagu duubay wakhti kasta saacaddan. Inta lagu jiro qaybta jimicsiga ee smartwatch lafteeda waxaan ka helnaa nashaadaad aan u adeegsan karno, kuwaas oo ah:
Ku orod hage
Banaanka ku ordaya
Banaanka ku soco
Ku lugeynta gudaha
Isticmaal baaskiil taagan
Ku ordaya gudaha
Ku orodka waddooyinka
Marka aan qabaneyno mid ka mid ah howlahaas, waa inaan ku hawlgalnaa qaybtan, si saacaddu ay ugu duubeyso waxqabadkeena habkan markasta. Intaa waxaa sii dheer, maadaama Huawei Watch GT 2 uu leeyahay GPS, waxaan awoodi doonnaa inaan si fiican u aragno dariiqa aan sameynay markii aan adeegsanaynay waqtigaas. Waxaan arki doonaa xog sida masaafada la heli karo mahadsanid shaqadan. Xogta ay ku bixinayso kiiskan had iyo jeer waa mid aad u sax ah, waxaan la barbardhigay barnaamij kale oo taleefanka ku jira (Google Fit) kala duwanaanshahooduna wuu yaraa, sidaa darteed si fiican ayey ugu hoggaansamaan dareenkan markaan u baahannahay inaan adeegsanno.
Intii aan ku guda jirnay howlahan, saacaddu waxay qori doontaa wax kasta oo aan qabanno (tallaabooyin, fogaansho, waqti, xawaare). Dhamaan howlaha aan qabanay waxaa lagu kaydiyaa qaybta diiwaanka jimicsiga, halkaas oo aan ka arki karno dhammaan xogtaan iyaga ku saabsan. Markaa annaga ayaa gacanta ku hayna howlahaas haddii aan rabno inaan markale aragno. Sidoo kale barnaamijka Huawei Health waxaad ku arki kartaa dhammaantood si caadi ah.
Fossil Sport Smartwatch, beddel dhab ah oo leh Wear OS [ANALYSIS]
Hurdo iyo kadeed
Saacaddaani waxay leedahay shaqada qiyaasta hurdada ee la heli karo. Waad ku mahadsan tahay, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan aragno tirada saacadaha aan seexannay, marka lagu daro muujinta macluumaadka ku saabsan wejiyada hurdada mar walba ee barnaamijka Caafimaadka ee Huawei. Markaa waxaan xakameyneynaa hurdada, oo leh dhibco ku saabsan tayada hurdo. Taariikh ayaa sidoo kale la muujiyaa, iyadoo la isbarbar dhigayo xogta maalmaha kale, si loo arko sida ay ugu xuubsiibato dareenkan.
Huawei Watch GT 2 sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan la socono heerka garaaca wadnaha. Waxay na siin doontaa fikrad qallafsan oo ku saabsan garaaca wadnaha mar walba. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay shaqo noo soo sheegi doonta haddii 10 daqiiqo joogteynteena ay aad u sarreyso ama aad u hooseyso. Tani sidoo kale waxay u shaqeysaa cabbiraadda culeyska fekerka, taas oo ah hawl kale oo aan ka helno saacadda. Waxay naga caawin doontaa inaan cabirno heerka walaaca aan qabno.
Wicitaanada iyo fariimaha
Laba hawlood oo aad muhiim u ah Huawei Watch GT 2, oo waliba ka soocaya saacadaha kale ee qaybtiisa qiimaha, waa wicitaanada iyo fariimaha. Waan ka jawaabi karnaa ama diidi karnaa wicitaannada aan taleefanka ka helno saacadda mar walba. Si tan ay u suurta gasho, saacadda waa in lagu xiraa iyada oo loo marayo Bluetooth iyo taleefankayaga, masaafada u dhexeysa labada qalabna kama badnaan karto 150 mitir.
Saacadda waxaa naloo ogol yahay in aan leenahay ajandaha 10 xiriir, sidaa darteed waxaan dooran karnaa dadkaas aan xiriirka badan la leenahay. Tayada wicitaanadu way ka badan tahay wax la aqbali karo, sidaa darteed waa ikhtiyaar wanaagsan haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah ama wicitaan aan dheereyn doonin. Fariimaha waa isku mid, waxaan ka akhrisan karnaa shaashadda saacadda waqti kasta dhib la'aan.
Soo bandhigida rasmiga ah ee Huawei Watch GT 2, suurtagalnimada ayaa la muujiyey. Saacaddu waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan dhageysano muusikada iyada ka timid, iyada oo ay ku mahadsan tahay af-hayeenkeeda lagu dhisay. Intaa waxaa dheer, waxay la timid keyd noo ogolaanaya inaan ku yeelano ilaa 500 heesood oo kala duwan. Waa hagaagsan tahay haddii aan rabno inaan dhageysano muusikada marka aan sameyno isboorti saacadda.
Hadaan rabno heesahaan markaa waa inaan kala soo baxnaa iyaga oo qaab MP3 ah ka dibna ku dheji saacadda. In kasta oo aan sidoo kale fursad u leenahay inaan ku beddelno qaabeynta ku jirta, si aan awoodi doonno inaan uga dhagaysanno muusikada codsiyada sida Spotify taleefanka. Waa ikhtiyaar hubaal u noqon doonta mid raaxo leh dadka isticmaala.
Madax-bannaanida: shaqada muhiimka ah ee Huawei Watch GT 2
Horeba markii uu soo bandhigayay waxaa si cad loogu sheegay. Huawei Watch GT 2 wuxuu u taagnaa inuu iskiis u maamulo, inta badan waxaa mahad iska leh soo saarida processor-ka cusub ee ku jira, kaas oo na siin lahaa waxqabad wanaagsan, marka lagu daro nolosha batteriga oo dheeri ku jirta. Tani waa wax in ka badan la kulmay.
Astaantu waxay shaacisay in nolosha batteriga ay gaari karto 14 maalmood dhibaato la’aan, in kastoo ay ku xirnaan doonto isticmaalka. Tani waa wax la xaqiijin karo, maadaama aan awood u yeeshay inaan arko sida xitaa isticmaalka badanaa loo isticmaalo, qaabeynta jimicsiga, dhageysiga muusikada, ogeysiisyada latalinta, iwm. Waxay igu qaadatay qiyaastii 11 maalmood dhibaato la'aan. Laga soo bilaabo markaan helay saacadda waxaan isticmaali jiray maalin kasta, qaar xoog weyn bay leeyihiin kuwa kalena wax yar, laakiin isticmaal badan.
Sida waa macquul, waxay ku xirnaan doontaa adeegsiga isticmaale kasta macnahaas, gaar ahaan haddii aan adeegsanno shaqooyinka sida shaashadda mar walba saaran, taas oo si weyn u yareysa ismaamulkeeda. Isticmaal dhexdhexaad ah waxay u oggolaan doontaa madax-bannaanida Huawei Watch GT 2 inuu sii fidiyo dhibaato la'aan illaa laba toddobaad, sidaas darteed waa arrin aad u muhiim ah oo shaki la'aan ka dhigaysa saacaddan ka socota astaanta Shiinaha inay ka dhex muuqato tartamayaasha suuqa.
Ma jirin wax been ah, sidaa darteed, in ismaamulka uu gaari karo labo toddobaad. Haddii aad raadineysay smartwatch oo ku siin doona ismaamul wanaagsan markasta, Huawei Watch GT 2 waxaa loo soo bandhigay mid ka mid ah xulashooyinka ugu dhameystiran ee arrintan la xiriira. Sida caadiga, yimaado iyadoo xeedho u gaar ah ku jirta sanduuqa iyo fiilada sidoo kale, si aan mar walba ugu xirno.
Huawei Watch GT 2 waxaa loo soo bandhigay sidii smartwatch aad u dhameystiran. Naqshad casri ah, isku-dhafan oo aad u fudud, taas oo ka dhigaysa isticmaalkeeda mid aad ugu habboon dhammaan noocyada xaaladaha oo dhan, labadaba marka la sameynayo isboorti iyo marka la xirto maalin-ka-maalinba. Intaa waxaa sii dheer, adoo haysta suumano la isku beddeli karo waxaan kula qabsan karnaa isticmaalkeeda xaaladahaas qaab aad u fudud.
Waxay noo oggolaan doontaa inaan isticmaalno marka ay tahay inaan jimicsi sameyno, iyadoo aan awoodno inaan cabirno waxqabadkeenna si sax ah. Marka lagu daro yeelashada shaqooyin dheeri ah oo ka dhigaya xiisaha noocaas ah, sida wicitaanada, muusikada ama xakameynta hurdada. Marka si wanaagsan ayey uga shaqaysaa arrintan. Ma iloobi karno batari weyn iyo ismaamul weyn taasi waxay na siinaysaa saacaddan, illaa laba toddobaad. Waxay ka dhigeysaa qaab aad u xiiso badan.
Shaki la'aan, kaliya qiimaha 239 euro, Huawei Watch GT 2 waxaa loo soo bandhigay mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican berrinka saacadaha casriga ah maanta. Waxay u hoggaansameysaa waxa isticmaaleyaashu ay ku raadinayaan dareenkan heerka shaqooyinka, naqshadeynta oo leh qiime aad u sahlan oo la heli karo inta badan. Iibsi aadan ka qoomameyn doonin.
Wax alaab ah lama helin.Iibso Huawei Watch GT 2 ″ /]
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Falanqaynta Huawei Watch GT 2: Smartwatch-ka oo leh madax-bannaani dheeraad ah
Huawei Nova 5T: qiimaha, qeexitaanada iyo helitaanka terminal-ka cusub ee Huawei
Sony waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa PlayStation 5 cusub